नेपाल आज | ब्वाँसो जस्तो छिमेकी भएकोले ओली चतुर हुनुपर्छ (भिडियो)
ब्वाँसो जस्तो छिमेकी भएकोले ओली चतुर हुनुपर्छ (भिडियो)
शुक्रबार, ०४ जेठ २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौं । तिखो र स्पष्ट बिचार राख्ने नेपाली सेनाका सेवा निवृत्त जनरल प्रेमसिंह बस्न्यातले फेरि तरंग उत्पन्न हुने अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेपालआजसँगको कुराकानीका क्रममा बस्न्यातले बाबुराम भट्टराईले भारतको माटोको आदेश पालना गरेर जीवन सार्थक बनाउनु भएको टिप्पणी गरेका छन् । भट्टराइको निधनपछि पनि उनको वास काशी गयामा हुने बताएका छन् । नेपालको सार्वभौमसत्ता भारतका कारण खतरामा नरहेको उनले दावी गरे । तर भारतले नेपाललाई भुटान बनाउन खोजेको उल्लेख गरे । भारतलाई बस्न्यातले ब्वाँसोको संज्ञा दिएका छन् । उनको धारणाको सार निम्नानुसार छः
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनीतिको मियो नै हिन्दु धर्म हो । हिन्दु धर्मकै आधारमा भारतीय जनता पार्टी जीवन्त भइरहेको छ । यसपटक भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालको तेस्रो पटक भ्रमण गरे । हेर्दा धार्मिक यात्रा जस्तो देखिए पनि खासमा यो राजनीतिक नै हो । मोदीले नेपाल भ्रमणको आसपास कर्नाटकमा चुनाव थियो ।
त्यहाँ भाजपालाई सफलता पनि मिल्यो । भारतका हिन्दुवालाहरुले नेपाललाई शीर मान्छन् । पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, कैलास सरोवर आदिलाई पुण्यभूमिहरुको शीर मानिएका कारण उनीहरु नेपालमा धार्मिक यात्रामा आउँदा पनि राजनीतिक अभिष्ट लुकेकै हुन्छ ।
अब नेपालले चीन तिर गएर विभिन्न सम्झौता, समझदारीमा फटाफट हस्ताक्षर गरिदियो भने भारतलाई ठूलो तोड पर्छ । चोट पर्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो प्राथमिकतामा छिमेकी भन्ने नीति मोदीले लिए । तर अहिले भारतको सम्बन्ध सबै छिमेकीसँग बिग्रेको छ । अर्कोतिर चीनले सबैतिर गएर फूल फूलाइदिँदैछ । भुटानलाई नै हेर्नुहोस् त ।
भुटानीहरुलाई कसरी भारतको पञ्जाबाट फुत्कौं भन्ने जपतप नै छ । भारतको पञ्जाबाट भुटान फुत्कियो भने ढल्किने भनेको चीन तिरै हो । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारतले बोआओ सम्मेलन छल्ने गरी भारत भ्रमणको निम्तो गर्यो ।
अब चीनको सन्दर्भ के हो भने उसले पैसा र व्यापारलाई पहिलो रोजाइमा राख्छ । नेपालमा चीनको चासो तिब्बत मामिलाबाहेक अरु छैन । तिब्बत मामिला नचर्किने हो भने नेपालतिरको टाउको दुखाई चीनलाई छैन । अहिले आएको विषय भनेको ओबिओआर हो । मोदीले चार पटक चीनको भ्रमण गरिसकेका छन् । व्यापार र दुई देशको हितको कुरा पनि भइसकेको छ । दोक्लाममा भएको विवादपछि दुई मुलुकले सम्वादबाट केही विषय छिनोफानो पक्कै गरेका छन् । यसमा पनि भारतले चीनसँग नेपाल, भुटान, बंगलादेश, मालिदिभ्स र श्रीलंकामा धेरै चासो नराख भनेको हुनुपर्छ । किनभने दक्षिण एसियामा भारत हैकम जमाउन चाहन्छ । त्यसो गरेमा हामी पनि अमेरिका तिर जाँदैनौ भनेर भारतले भनेको हुनुपर्छ
हामीले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर पनि नेपालका धार्मिक स्थलहरुको यति प्रचार हुँदैन थियो, जुन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा भयो । तर एउटा मुलुकको विषयमा यति मात्रै हुँदैन । नेपाल–भारतबीच कैयन विवाद छन् । त्यो विषयमा पनि त केही गर्नु पर्छ ।
यसपटक मोदीको भ्रमणमा क्रमभंग भएको छ । म पनि सैनिक हो देशको । नेपालीहरुको इज्जतमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । जंगबहादुरको शासन पछि नेपालमा ठूला ठूला ब्रिटिस पदाधिकारीहरुले नेपाल भ्रमण गरे । जसरी अहिले नेपाल आर्मीको क्षमता हुँदा हुँदै भारतको सेना नेपाल आयो । के नेपालले सुरक्षा दिन नसक्ने अवस्थामा थियो ? सुनिन्छ कि नेपाल आउँदा धेरै सेना आए । धेरै त कवर्टमा थिए । धेरै आर्मीहरु नेपाल आएका थिए । यसबारेमा नेपालका जिम्मेवारहरु कोही पनि बोल्दैनन् ।
हामीसँग सुरक्षा दिन सक्ने सामथ्र्य हुँदा हुँदै नेपालमा भारतीयहरुको प्रभाव बढ्यो ।
नेपालमा रहेको भारतीय दूतावासले आफ्ना प्रधानमन्त्रीको थ्रेट एसेस्मेन्ट पठाउँछन् । मोदीकै कारण २०१५ पछि नेपालमा एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट छ भन्ने बुझेका छन् । त्यो सेन्टिमेन्टका कारण कालो झन्डा देखाउला कि ढुंगा हिर्काउला कि भन्ने थियो होला ।
नेपालका पूर्वमन्त्रीकै पछाडि सुरक्षाकर्मी छन् । भनेपछि नेपालमा असुरक्षा भएको जस्तो देखिन्छ । खासमा सुरक्षा थ्रेट भएर होइन काजी साहेब बन्नका लागि नेपालमा पूर्वमन्त्रीहरुले सुरक्षा लिएका हुन् । त्यसैलाई सुरक्षा राम्रो छैन भन्ने देखाएर भारतीय प्रभाव बढाउने गरिएको छ ।
नेपालमा त के छ भने नेपाली नै भएर भारतको बढी माया गर्नेहरु पनि छन् । पेटमा विदेशीको जुठो भात नपरेसम्म विदेशीको भक्ति कसैले पनि गाउँदैन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालमा थाइ जहाज दुर्घटना हुँदा सोझै भारतलाई फोन गरे । भारतबाट उद्धार टोली आयो । उद्धार नेपाली सेनाले गर्यो । भारतबाट आएकाहरुले सोल्टी होटलमा बसेर जाँड खाएर गए । पैसा नेपाल आर्मीले तिर्नु पर्यो ।
नेपालको सार्वभौकितामा भारतबाट खतरा छैन । युरोपेली युनियनबाट खतरा छ । भारतले नेपालको राजनीतिमा मात्रै कब्जामा लिन खोज्छ तर युरोपेली युनियनले जात–जातबीच
लडाउने काम गर्छ । यिनीहरुले एनजिओ चलाएका छन्, एनजिओले नेपाल चलाइरहेको छ । नेपाल र भारतको सीमामा खान नपाउने बिहारीहरुलाई राखिदिएको छ । तिनीहरुले नेपालको भूमि मिचेका छन् । त्यसमा भारतका सुरक्षाकर्मीले संरक्षण गर्छन् ।
युरोपेलीको दानापानी खाने सभामुखले युरोपेली युनियनको प्रतिवेदन बुझेको पनि देखियो । यो अचम्मको विषय छ ।
अन्ततः नेपालको भूभागलाई इसाई धर्म फैल्याएर भारतविरुद्ध प्रयोग गर्ने युरोपेली युनियनको योजना हो । मोदीले भारतलाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने भनेका थिए । त्यस्तो भयो भने क्रिष्चियनहरुको दाल गल्दैन । अनि त्यसविरुद्ध अहिले नै युरोेपेली युनियनको चाहना धर्मको मार्फत यो उपमहाद्वीपमा हस्तक्षेप बढाउने हो ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोदीका अगाडि विलाप गरे । उनलाई संसारले थुकिसकेको छ । मुख्यमन्त्रीको स्टाटस जानकी मन्दिरको भिखरी जतिको पनि औकात छैन । उनले के जनकपुर बनाउँछन्, जो आफै मुसलमान हुन् । नांगै हिँड्नेहरु छन् । नाकाबन्दीमा पारिको भात खाएर वारि ढुंगा हान्ने अंगीकृतेहरुले देश बिगारेका छन् । तराईका अधिकांश भूमिपुत्रहरुसमेत यी अंगीकृतेबाट पीडित छन् ।
भारतले नेपालको जमिन कब्जा गर्न खोजेको छैन । उसको चाहना भनेको भुटान जस्तो बनाउन खोजेकोछ । परराष्ट्र उसले आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न खोजेकोछ । नेपालीहरु भारतको दास बन्न सक्दैन । अहिलेको एक पुस्ता छ, जसले भारतको पैसामा बिकेका छन् । नेपालको भात खाएर भारतको गीत गाउँछन् ।
नेपालमा राणाविरोधी आन्दोलन चलिरहेको थियो । मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री थिए । उनलाई भारतले भ्रमणमा बोलाए, भव्य स्वागत गरियो । विश्वकै शक्तिशाली नेताजसरी भारतले स्वागत गर्यो । सम्मान गर्यो । फकाई फकाई १९५० को सन्धि गरायो । बलि दिनु अघि बोकाको पूजा गरेजस्तो गरी भारतले सन्धि गरायो । अब चिन्ता यो छ कि मोहन शमशेरको नियति केपी ओलीको नहोस् । जनकपुरमा ओली–मोदीले लगाएको टोपी मिथिलाको होला भनेको त होइन रहेछ । ब्वाँसो जस्तो छिमेकी भएको बेला बढी चतुर हुनुपर्छ, केपी ओलीले ध्यान दिनु पर्छ ।
राजेन्द्र महतो र विमलेन्द्र निधिलाई हेरेर सबै मधेसी यिनीहरु जस्तै हुन्छन् भन्ने ठान्नु गलत हो । सीमा मिचिँदा गोली खाने, भारतीय एसएसबीको ज्यादती सहने देशभक्त मधेसी धेरै छन् । अंगीकृत नागरिकता मधेसीले बाँडेको हो र, यिनै पहाडीया बिकाउ कर्मचारीले बाँडेका त हुन् । पाँच सय घूस लिएर नागरिकता बाँडने पहाडीय कर्मचारी नै हुन् । प्रदेश २ बनाउँदा पहाड जाड्नु पर्दैन थियो ? हिमाल जोड्नु पर्दैन थियो ? त्यस्तो अर्थ न बर्थको प्रदेश बनाएर के अब त्यहाँको विकास हुन्छ ?
यस्तै बेथितिको बिउ रोपेर बाबुराम भट्टराईले जीवन सार्थक बनाइसक्नु भएको छ । उहाँ मर्नुभयो भने पनि अब सोझै काशी गयामा उहाँको आत्माको बास हुन्छ । बाचुञ्जेल पनि भारतको मरेपछि पनि उतैको हुने गरी पुण्य काम उहाँले गरिसक्नु भयो । नेपालको माटोले भने उहाँलाई कहिले पनि आशीर्वाद दिने छैन । भारतको माटोको त उहाँले आदेश पालना गरेर जीवन सार्थक बनाएको महशुस गर्नुभएको छ ।
केही कुपात्रले गर्दा यस्तो भएको हो ।
स्ट्रेट फरवार्ड प्रेमसिंह बस्न्यात